Shikhar Insurance Company limited(Shikhar Insurance Company limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
शिखर इन्स्योरेन्सद्वारा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व परिमार्जन, अब कति–कति ?
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व परिमार्जन गरेको छ। कम्पनीले झन्डै १६ लाख कित्ता संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै सेयर स्वामित्व परिमार्जन गरेको हो। सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्न कम्पनीले १५ लाख ८२ हजार ६७१ कित्ता संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण...
सेबोनसँग शिखर इन्स्योरेन्स र एक्सेल बैंकले मागे हकप्रद निष्कासनको अनुमति, कसको कति ?
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले हकप्रद निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अनुमति मागेका छन्। शिखर इन्स्योरेन्स र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक दुवैले चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग्र्दै शिखरले गते जेठ २५ गते र...
शिखर स्वास्थ्य बीमाले कोभिडको जोखिम पनि कभर गरिदिएपछि सर्वसाधारणलाई राहात
शिखर इन्स्योरेन्सको ३०% हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल नियुक्त
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नका लागि एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी सम्झौतामा शिखर इन्स्योरेन्सका तर्फबाट कम्पनी सचिव सुरज राजबाहक तथा एनआईबिएल एस क्यापिटलका तर्फबाट नायब प्रमुख...
काठमाण्डौ। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सेयरधनीको हितग्राही खातामा बोनस सेयर जम्मा गरिदिएको छ। कम्पनीले आज एक सूचना प्रकाशित गरी चैत ९ गते सम्पन्न गरेको १५ औँ र १६ औँ साधारणसभाबाट पारित २७.७६९ प्रतिशत बोनस सेयर सेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको जानकारी गराएको हो। कम्पनीले गत वर्ष फागुन २५ गतेसम्म सेयर अभौतिकीकरण...
शिखर इन्स्योरेन्सले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व परिवर्तन प्रक्रिया अगाडि बढायो
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कम्पनीले गत चैत ९ गतेसम्म १५ औँ र १६ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसअघि कम्पनीमा संस्थापक...
इक्राले दियो शिखर इन्स्योरेन्सलाई न्यून क्रेडिट जोखिमको रेटिङ
काठमाण्डौ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई विगतमा प्रदान गरेको ‘(इक्रा–आईआर) ए’ निष्कासनकर्ता रेटिङलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। उक्त रेटिङ प्राप्त गर्ने निकायहरु समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित मानिन्छन्। यस्ता निकायहरुमा न्यून क्रेडिट जोखिम रहेको हु�...
बीमा समितिबाट शिखर इन्स्योरेन्सको ३०% हकप्रद स्वीकृत, निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने हकप्रद सेयर निष्कासनको स्वीकृति पाएको छ। कम्पनीको आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीलाई नियामक बीमा समितिले ३० प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति दिएको हो। बीमा समितिबाट स्वीकृति पाएसँगै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट...
शिखर इन्स्योरेन्सको नाफा १०.२६%ले बढ्यो, बीमा शुल्क आर्जन रु. १ अर्ब माथि
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ११.९७ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ९६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको...
काठमाण्डौ । नेपाली बीमा बजारमा शिखर इन्स्योरेन्सको ‘अटो प्लस बीमा’ पोलिसी निकै लोकप्रिय बनेको छ। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत मंसिरबाट सुरु गरेको सवारीसाधन अतिरिक्त लाभ बीमालेखअन्तर्गतको ‘अटो प्लस बीमा’ कार्यक्रमले छोटो समयमै लोकप्रियता पाएको हो। मोटर बीमा निर्देशिका, २०७३ मा समावेश नभएका सुविधा र पूर्ण राहात दिने शिखर...
शिखर इन्स्योरेन्समा बीमा गराउँदा स्याउ किसान डुब्नबाट जोगिए, १३९१ ले पाए साढे २ करोड दाबीभुक्तानी
काठमाण्डौ। शिखर इन्स्योरेन्सले मौसम सूचकांकमा आधारित स्याउखेतीको बीमा गरेका कर्णालीका किसानलाई २ करोड ५५ लाख रुपैयाँबराबरको दाबी रकम भुक्तानी गरेको छ। माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट र मुगु जिल्लाका गरी १ हजार ३९१ जना किसानलाई २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ दाबीभुक्तानी हस्तान्तरण गरिएको हो। जुम्लामै सबैभन्दा बढी ७०० बिरुवाको बीमा...
आजसम्म कायम सेयरधनीले शिखर इन्स्योरेन्सको २९.२३% लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष प्रस्ताव गरेको आकर्षक लाभांश सुरक्षित गर्ने आज (फागुन २५ गते) अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांशसहित विभिन्न अजेन्डा पारित गर्न कम्पनीले आउँदो चैत ९ गते आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। लाभांश र साधारणसभा प्रयोजनका लागि भोलि (फागुन २६ गते) देखि सभा...
अमेरिकामा नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड : खोप लगाएकाहरु विनामास्क भेटघाट गर्नसक्ने
काठमाण्डौ । अमेरिकामा कोरोनाभाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाएकाहरु अब विनामास्क भेटघाटमा सहभागी हुन सक्ने भएका छन्। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडिसी)ले कोरोनाविरुद्धको खोपको पूर्ण डोज लगाइसकेका अमेरिकीहरु सामान्य जनजीवनमा फर्किन सक्ने गरी नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड तयार गरेको हो। उनीहरूले अरु खोप लगाइसकेका तथा...
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मर्जरको प्रक्रियालाई त्यागेर आफैँ पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड (आईजीआई) र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (एचजीआई) सँगको मर्जका लागि धेरै चरणका छलफलहरु चलाइसकेको थियो।...